I-Honor 8C ivela kwi-VMall eneenkcukacha zayo kunye nemifanekiso | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwi-Okthobha elandelayo 11, Inkxaso yeHuawei ukumilisela i-Honor 8C, ifowuni ekumgangatho ophakathi kunye neprosesa ye-Snapdragon 632. Ngenxa yoku, iya kuba yifowuni yokuqala kwintengiso yokuxhobisa le modeli ngeNkqubo-kwi-Chip, evela eQualcomm.
Olu lwazi lusandula ukuvuza iVMallIvenkile yase-China ekwi-intanethi engafuni ukulinda inkampani ukuba iyazise ngokusesikweni, ukuze iyipapashe kwiwebhusayithi yayo kunye neenkcukacha zayo kunye nemifanekiso yayo. Yazi!
Ngokwoluhlu lwe-VMall, I-Honor 8C inesikrini esili-6.26-intshi ye-IPS LCD. Iza nenotshi ethe tyaba ethe tye, inesisombululo se-HD + se-1.520 x 720 iipikseli, kwaye inika umlinganiso wesikrini ukuya kumzimba we-80.4%, kunye ne-slim 19: 9 factor ratio.
Njengoko silindele, I-Snapdragon 632, eyabhengezwa ngoJuni kulo nyaka, izakubakhona phantsi kwesixhobo. I-chipset ibandakanya ii-250 GHz Kryo 1.8 cores kunye nezinye i-Kyro 250 cores zamaza afanayo, kunye ne-Adreno 605 GPU.
I-SoC iya kudityaniswa ne-4 GB ye-RAM kunye ne-32 okanye i-64 GB yendawo yokugcina yangaphakathi, enenkxaso yokwandiswa ngekhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kumthamo we-256 GB. Ukongeza koku, Inebhetri ye-4.000 mAh ene-5V / 2A yokubiza, eya kusinika ukuzimela okuhle kakhulu. Ngaphandle koko, iza ne-Android 8.1 Oreo phantsi kwe-EMUI 8.2 kwaye ineminwe yokufunda ngasemva.
Kwicandelo lokufota, iHonor 8C ixhobisa ikhamera yeselfie eyi-8 ngef / 2.0 ukuvula kunye nokuseta kabini kwekhamera kubandakanya inzwa ye-13-megapixel ephambili ene-f / 1.8 ukuvula kunye ne-2-megapixel monochrome sensor nge f / 2.4 ukuvula. Ikhamera yangaphambili inenkxaso yokwamkelwa kobuso be-AI.
Iinketho zonxibelelwano ezifumanekayo kwi-Honor 8C kubandakanya unxibelelwano lwe-4G VoLTE, inkxaso ye-SIM-mbini, iBluetooth 4.2, iWi-Fi 802.11 b / g / n, iGPS, kunye ne-3.5mm audio jack. Iskena sokuprintwa kweminwe sikhona ngasemva kwifowuni.
Imbeko 8C eyahlukileyo yemibala ibandakanya ezi ndlela zilandelayo: uMlingo woMnyama oMnyama, iAurora Blue, iPlatinamu yeGolide, kunye noMfusa. Okwangoku, akukho lwazi lufumanekayo kumaxabiso e-Honor 8C. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba i-Honor 8X inexabiso lokuqala le-1.399 yuan (~ 175 euros), i-Honor 8C elandelayo inokuxabisa malunga ne-999 yuan (~ 125 euros). Le yinto eshiyekileyo ukuba ibonwe nge-11 ka-Okthobha, umhla wokumiselwa ngokusesikweni.
Ngolwazi oluthe kratya kwifowuni, ndwendwela Hlonipha iphepha le-8C VMall. Yonke into malunga noku ibhalwe phaya phakathi kuluhlu elandelayo ukuba iboniswe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukucaciswa kunye nemifanekiso ye-Honor 8C ivela kwi-VMall: ifowuni yokuqala ene-SoC SD632